वैज्ञानिक र सामाजिक अनुसन्धान को लागि तयार गर्न, तपाईं धेरै चरणमा मार्फत जानैपर्छ। पहिलो, तपाईंले अध्ययनको विषय रूपमा यस्तो कुरा अध्ययन गर्न आवश्यक छ। यो वैज्ञानिक अनुसन्धान काम वस्तु क्षेत्र, वस्तु र अध्ययन को विषय सहित सम्पूर्ण प्रणाली छानबीन छ। वस्तु क्षेत्र जो, आफै, आफै अध्ययन को वस्तु छ अभ्यास र विज्ञान, को स्कोप समावेश छ। वस्तु पनि परिभाषित प्रक्रिया र घटना समस्या अवस्था गराउँछ कि रूपमा सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। विषय, बारी मा, जो भित्र यो नै खोज सञ्चालन गरिएको छ वस्तुको विशिष्ट भाग implies। अध्ययन को वस्तु मूर्त र intangible दुनिया घेरिएको केही बुझ्न सक्छौं अन्तर्गत, यो जो प्रत्येक अन्य, मान्छे र जीवित जीव अन्तरक्रिया भौतिक शरीर, हुन सक्छ। अनुसन्धान विषयको मात्र अन्वेषक मन मा अवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को शब्दमा, अध्ययन को वस्तु मात्र वैज्ञानिक ज्ञान निर्भर र यो अभिन्न भाग हो गर्न सक्नुहुन्छ।
समाजशास्त्र मा अध्ययन को विषय जस्ता अवधारणाहरु आदर, त्यहाँ सामाजिक वास्तविकता वस्तु हो। सामान्यतया, वस्तु र सामाजिक विषयको अनुसन्धान - विभिन्न अनुसन्धान समाज गर्न अस्पष्ट दृष्टिकोण निर्धारण गरिन्छ कि एक निर्देशन। सामाजिक अध्ययन सामाजिक समाज र प्रकृति को ज्ञान विचार गर्नुहोस्।
समाजशास्त्र मा अध्ययन को विषय - त्यहाँ निष्ठा र पूर्णता छ वास्तविकता को एक निश्चित क्षेत्र हो भनेर। संसारको ज्ञान दुवै प्राकृतिक र सामाजिक र मानवीय क्षेत्रहरु अध्ययन जो मानिस र प्रकृति, को पक्षमा विभिन्न विज्ञान को वस्तुहरु।
एउटा तरिका वा अर्को, तर वस्तु र अध्ययन को विषय यसको संरचना मा मूर्त र intangible हुन सक्छ। अध्ययन विषयको व्यक्तिगत गुण र प्राकृतिक र सामाजिक घटना को भाग हो। वैज्ञानिक विषयों, उदाहरणका लागि, वस्तु को अलग क्षेत्रहरू विचार गर्दै छन् जीव को अध्ययन मा उत्पन्न र शारीरिक र morphological सर्तहरू, अर्डर र विकास को सिद्धान्त मा। तर समाज को जीवन को अध्ययन मा - अनुसन्धान नीति वस्तुहरु, समाजशास्त्र र अर्थशास्त्र।
त्यहाँ पनि अध्ययन को विषय छ जो आर्थिक अर्थव्यवस्था को एक खण्ड छ। यसलाई - वृहदअर्थशास्त्र, प्रमुख आर्थिक प्रक्रियाहरू र घटना को अध्ययन गर्न समर्पित छ जो। यहाँ, वृहदअर्थशास्त्र को अध्ययन विषयको वृद्धि को संकेतक generalizing वा सारा देश को अर्थव्यवस्था characterizes कि मात्रा कम, वृद्धि दर छ।
वृहदअर्थशास्त्र राष्ट्रिय अर्थव्यवस्था गरेको आर्थिक जीवन, साथै वृहदअर्थशास्त्र प्रजा को मात्रा अध्ययन क्षेत्रहरु, क्षेत्र र उद्योग लोक र छ जाँच्ने विश्व अर्थव्यवस्था पूरै रूपमा।
वस्तु र अध्ययन को विषय निर्धारण गर्न, यो मुख्य उद्देश्य जाँच्न आवश्यक छ। किन अध्ययन र प्रजा र वस्तुहरु अन्वेषण गर्न आवश्यक छ? यसैले, अध्ययन को उद्देश्य यसको काम पूरा गर्न कुनै पनि शोधकर्ता गर्ने कोसिस हुनेछ, जो अन्तिम परिणाम, ल्याउन छ। अध्ययन को उद्देश्य को उद्देश्य हासिल गर्न तरिका र साधन समावेश गर्नुहोस्।
सामान्यतया, अध्ययन को विषय रूपमा यस्तो अवधारणा मा, त्यहाँ केही मतभेद छन्। अध्ययन को विषय फरक चरित्र हुन सक्छ। वस्तु - को भाग हो को उद्देश्य वास्तविकता, वैज्ञानिकहरू द्वारा आयोजित अध्ययन। विषय - उद्देश्य वास्तविकता ज्ञान संयोजन। यसलाई एक निश्चित आकार र गुण छ, हथौडा अध्ययन को वस्तु हो - यहाँ एउटा उदाहरण हो। तर हथौडा actuated र pounding सुरु गर्दा, उहाँले गतिविधि को वस्तु हुन्छ, अर्थात्, nailing लागि विषय।
रासायनिक संतुलन - उल्टाउन रासायनिक प्रतिक्रिया आधारित
चाँदी (धातु): गुणहरू, फोटो। चाँदी कसरी पहिचान गर्न
व्यावसायिक सैलून टेनिंग: समीक्षा, मूल्यहरू चरणमा
बर्गर राजा (आवेदन): आय वा चकमा?
यूएसएसआर र संयुक्त राज्य अमेरिका को जीडीपी: तुलना
फिलर गरेकी बारेमा सानो
मास्को सर्वश्रेष्ठ मेक्सिकन रेस्टुरेन्ट